Myanmar's Union Election Commission (UEC) headquarters in Naypyidaw is seen on October 27, 2015. The once junta-run nation heads to the polls on November 8, 2015 in what voters and observers hope will be the freest election in decades. AFP PHOTO / ROMEO G
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပချိန် အလှမ်းမဝေးတော့ပေမယ့် ပြည်သူလူထုရဲ့ လှုပ်ရှားတက်ကြွမှုတွေ သိပ်မတွေ့မမြင်ရသေးပါဘူး။ ပြည်သူတွေ လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကို စိတ်ဝင်စားကြပါရဲ့လား။ ဒီရွေးကောက်ပွဲက ဘယ်လို အပြောင်းအလဲမျိုးတွေ ပေါ် ထွက်လာဖို့ မျှော်လင့်နိုင်ပါသလဲ။ ကိုယ်တိုင် ၁၉၉၀ ပြည့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ကိုယ်စားပြု ရွေးကောက်ခံတဦး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့အရေးသုံးသပ်သူ ဒေါက်တာတင့်ဆွေနဲ့ ဦးကျော်ဇံသာတို့ ဆွေးနွေးသုံးသပ်ထားပါတယ်။
မေး ။ ။ ဒီတပတ်မှာ ကျနော်ဆွေးနေစေချင်တာက မြန်မာနိုင်ငံမှာ မကြာခင်ကျင်းပတော့မယ့် ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ ဒီမိုကရေစီရဲ့  အရေးကြီးတဲ့ ဖြစ်ရပ်တခု ဖြစ်သလို၊ ပြည်သူတွေက သူတို့ဘာတွေ လိုချင်တယ်၊ နိုင်ငံရေးဆန္ဒ ဘာတွေရှိသလဲဆိုတာကို ဖော်ထုတ်တဲ့ပွဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တော်တော်လေး တက်တက်ကြွကြွ ရှိကြပါတယ်။ ပြည်သူတွေ နိုင်ငံရေးအသိတရား နိုးကြားတက်ကြွနေရမယ့်အချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နောက်လာမယ့် (၅) လမှာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခုအခါမှာ နိုင်ငံရေးအရ တက်ကြွလှုပ်ရှားစွာ လုပ်ကိုင်နေတာကို ဘာမှမတွေ့ရဘူးဆိုတော့ ကျနော် စဉ်းစားမိပါတယ်။ ပထမတခုက ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့်လား။ သို့တည်းမဟုတ် ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ အရင်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ မတူတော့ဘဲနဲ့ သိပ်စိတ်ဝင်စားစရာ၊ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်နေလို့လားဆိုတာကို ဆရာ ဘယ်လိုသုံးသပ်ပြောလိုပါလဲ။ ကနဦး အကျဉ်းချုပ်သုံးသပ်ပြပါ။
ဖြေ ။ ။ ပထမတချက်ကတော့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် ကူးစက်ရောဂါလို့ ထင်တာပေါ့။ သို့သော်လဲပဲ ဒီထက်လေးနက်တဲ့ နိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေ သုံးသပ်လို့ရတယ်။ ပထမတချက်ကတော့ ဦးကျော်ဇံသာ ပြောသလိုပဲ အခါတိုင်း ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာလဲ လက်ရှိ အာဏာရပါတီ NLD က နိုင်နိုင်တယ်။ နိုင်မှာသေချာတယ်ဆိုတဲ့ သေချာမှုတချက်။ ဒုတိယတချက်ကတော့ NLD နိုင်လဲပဲ ပြီးခဲ့တဲ့ (၅) နှစ်ကို ကြည့်ပြီးတော့ တိုင်းပြည်ထူးပြီးတော့ ကောင်းလာစရာ အလားအလာ အများကြီးမျှော်လင့်လို့ မရသေးဘူးဆိုတဲ့ အချက်ကတခု။ နောက်တချက်ကတော့ NLD ပါတီရဲ့  ပြီးခဲ့တဲ့ (၅) လကို ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် အားရတာတွေလဲရှိတယ်။ အားမရတာတွေလဲ ရှိတယ်။ အဲဒါ နောက် (၅) နှစ်လည်း ဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်။ နောက်တခါ NLD မဟုတ်တဲ့ တခြားပါတီတွေ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီအပါအဝင် ပါတီအသစ်တွေကောဟာ ကျနော့်အမြင်မှာတော့ ပြည်သူလူထုလည်း ဒီလိုမြင်ကောင်းမြင်နိ်ုင်ပါမယ် - NLD ကို ကျော်နိုင်မယ့် အလားအလာ မရှိနိုင်ဘူးတချက်ရယ်၊ နောက်အရေးကြီးဆုံးတချက်ကတော့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကို ပြည်သူပြည်သားတွေက NLD ဘယ်လောက်ကြိုးစားကြိုးစား မရခဲ့တာရှိတော့ အခုအားလျှော့တဲ့သဘော မဟုတ်ဘဲနဲ့ NLD (၇၅) ရာခိုင်နှုန်း နိုင်တဲ့ပါတီတခုခုကတော့ ရှိတော့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ အနေနဲ့ကတော့ NLD ကိုပဲ မဲပေးနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်တဲ့အတွက် ပြည်သူလူထုဟာ တခြားသောမျှော်လင့်ချက် မရှိတဲ့အတွက် လက်ရှိအတိုင်းပဲ အေးအေးဆေးဆေးသွားမယ့်ဆိုတဲ့ ယူဆချက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတချက်ကတော့ ကျနော်တို့လူမျိုးတွေက သိတဲ့အတိုင်းပဲ ဖုတ်ပူမီးတိုက်၊ ကောက်ရိုးမီးဆန်ဆန် နီးလာတော့မှ ဝုန်းဝုန်းဒိုင်းဒိုင်း တက်တက်ကြွကြွ လုပ်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။
မေး ။ ။ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ဖို့အတွက် (၇၅) ရာခိုင်နှုန်းလိုတယ်။ အဲဒါကြောင့် NLD ကိုပဲ အားပေးမယ်လို့ ဆရာကတွက်တယ်။ သို့သော် လူတချို့ က စဉ်းစားကြတယ်။ NLD က ပြည်ပမှာတော့ နိုင်နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ NLD ဟာ ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ ထောက်ခံမှုနည်းသွားမယ်လို့ တွက်နေကြပါတယ်။
ဖြေ ။ ။ အဲဒါလဲ မှန်ပါတယ်။ သို့သော်လဲပဲ ကျနော်တို့သမိုင်းကြောင်း ၁၉၉၀၊ ၂၀၁၂၊ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုကြည့်ရင် NLD ဟာ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ နိုင်တာနည်းတယ်။ တိုင်းရင်းသားပါတီ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုခံပါတီတွေကပဲ နိုင်ကြတာများတယ်။ အဲဒီတော့ လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲလည်း အဲဒါထက်ထူးမယ်လို့ ကျနော် မထင်ဘူး။ NLD ကလည်း ပိုပြီးတော့ မျှော်လင့်ထားပုံတော့ မရဘူး။ ဒါကြောင့် နောက်ရွေးကောက်ပွဲလည်း တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ အခုထက် နည်းနည်းလျော့ကောင်းတော့လျော့မယ် ကျနော်ထင်တာကတော့ တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားပြုပါတီတွေက နိုင်နိုင်တယ်။ သို့သော်လဲပဲ လွှတ်တော်အရေအတွက်တခုလုံးနဲ့ ယှဉ်ရင်တော့ NLD ဟာ အရေအတွက်အရတော့ သိပ်ပြီးတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ထက်တော့ ထူးမယ်လို့ ကျနော်မထင်ဘူး။
မေး ။ ။ နောက်တခုက NLD ဟာ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအတွက် အခက်အခဲရှိတာ အမှန်ပါပဲ။ ဆိုတော့ အခုရွေးကောက်ပွဲနဲ့ တက်လာပြီးလို့ NLD ထပ်နိုင်ပြီဆိုရင်ကော ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်နိုင်မယ့် အလားအလာ ဘယ်လောက်များ ရှေ့ ကိုတိုးပြီး ရှိလာနိုင်ပါသလဲ။ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်နိုင်မယ့်အလားအလာ ဘယ်လောက်ပိုပြီးကောင်းလာနိုင်မယ် ထင်ပါသလား။
ဖြေ ။ ။ ကံသေကံမတော့ မှန်းလို့မရဘူး။ သို့သော်လဲပဲ NLD ဟာ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေးကို ကတိပေးထားတဲ့အတိုင်း ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ပြည်သူလူထုကလည်း ပူးပေါင်းပါဝင်တယ်။ တခြားသော မဟာမိတ်ပါတီတွေကလည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြလို့ အဆင့်တော်တော်တခုတော့ ရောက်လာခဲ့တယ်။ လွှတ်တော်ထဲမှာ ကော်မတီဖွဲ့ပြီး ပုဒ်မတွေကို `၏ သည် ပြင်တာလောက်တော့ ရလာတာပေါ့။ အဲဒီတော့ (၅) နှစ်အတွင်းမှာ အဲဒီလောက်ရရင် နောက် (၅) နှစ်မှာတော့ ဒီအတိုင်းတော့ NLD က သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ တခြားသောနည်းဗျူဟာ ပြောင်းပြီးတော့၊ တိုးပြီးတော့ နည်းဗျူဟာနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး လုပ်လာနိုင်တယ်။ အဲဒီလိုလုပ်လာနိုင်ခြင်းဟာ အဓိကတော့ ကျနော်မြင်တယ် အတားအဆီးဟာ တပ်မတော် စစ်တပ်ပါပဲ။ အဲဒီတော့ တပ်မတော်ကို ဘယ်လိုစည်းရုံးမလဲ။ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲကတော့ NLD ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့  ခေါင်းထဲမှာတော့ ရှိနေမယ်လို့တော့ ကျနော်ထင်တယ်။ အဲဒီတော့ နည်းသစ်လမ်းသစ်တွေနဲ့ NLD ဟာ တပ်မတော်ဘက်က လျှော့လာအောင်၊ သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး အတိုင်းအတာတခုအထိ ရောက်အောင် NLD က နည်းသစ်တွေ ရှာနိုင်တယ်လို့တော့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
မေး ။ ။ တပ်မတော်ကို စည်းရုံးပြီးတော့ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဖို့ ကြိုးစားသလိုပဲ။ တချိန်တည်းမှာ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့  အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြင်စရာတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ ရွေးကောက်ပွဲနိုင်တဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကို ဝန်ကြီးချုပ်ခန့်ခွင့် မပေးတာ၊ ဒါကို ၄၇ ဖွဲ့စည်းပုံကတည်းက ဒီပြဿနာက ရှိလာတဲ့ကိစ္စပါ။ ဆိုတော့ အဲဒီကိစ္စတွေမှာကော တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ အပေးအယူလုပ်ပြီးတော့ အဲဒီဘက်မှာ ပိုပြီးတော့ တိုင်းရင်းသားတွေကို ပိုပြီးအခွင့်အရေးပေးလာခြင်းအားဖြင့် တိုင်းရင်းသားတွေ ထောက်ခံမှုရအောင် NLD အနေနဲ့ လုပ်လာစရာ မမြင်ဘူးလား။
ဖြေ ။ ။ အဲဒါလဲပဲ တခုရှိတယ်။ လက်ရှိ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအရ စခန်းသွားနေကြရတာ ဖြစ်တာကြောင့် NLD ပဲတက်တက်၊ တခြားပါတီပဲတက်တက် လက်ရှိအတိုင်း သမ္မတခန့်တဲ့လူက ဝန်ကြီးချုပ်ပဲ ရွေးရတယ်ဆိုတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်း သွားရတာ။ အဲဒီအတွက် တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ ကျနော်မြင်တာ တချို့ ဒေသတွေမှာ အဲဒီဒေသခံတိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့ ထိပ်တိုက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် အတိအလင်း။ အဲဒီတော့ နောင်မဖြစ်အောင်ဆိုတာလဲ ကျနော်အမြင်ကတော့ အာမခံလို့တော့ မရဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အစိုးရတရပ်ဟာ ဖွဲ့ကတည်းက ဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်း သွားရမှာဆိုတော့ အခု ၂၀၁၅ ကို ကြည့်လိုက်ရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းဟာ တော်လှန်ရေးဆန်တဲ့ လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ ညင်ညင်သာသာ သွားတဲ့နည်းကို သွားနေတော့ ကျနော့်အမြင်ကတော့ နောင် (၅) နှစ်လဲပဲ NLD နိုင်လို့ရှိရင် ဖွဲ့စည်းပုံကိုကျော်ပြီးတော့ တနည်းအားဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံကို ထားလို့ရတဲ့အပိုင်းတွေ ထားပြီးတော့ တော်လှန်ရေးဆန်တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ကောင်းမှလုပ်မယ်လို့ ကျနော်မျှော်လင့်တယ်။ ဒါကြောင့် တိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကလဲ တခြားနည်းတွေနဲ့ ကြိုးစားကောင်းကြိုးစာရင်တော့ ရလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်ထင်တယ်။
မေး ။ ။ နောက် ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိမယ့် အလားအလာကော NLD က နိုင်ခဲ့ရင် ဘယ်လောက်ရှေ့ တိုး ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။ ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာကော ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဘယ်သူဆောင်ကျဉ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ ကိစ္စမျိုးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အရေးပါတဲ့ ကိစ္စတခုလို့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာအကြောင်းတခုကော ဖြစ်မနေဘူးလား။
ဖြေ ။ ။ ကျနော့်အမြင်ကတော့ ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ တိုင်းပြည်အတွက် အရေးကြီးဆုံး ကိစ္စရပ်ကြီးတခု ဖြစ်သင့်တယ်လို့ ကျနော်ယူဆတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ အကြောင်းအချက် issue ကြီးတခု ဖြစ်သင့်တယ်လို့ ကျနော်ယူဆတယ်။ သို့သော်လဲပဲ အခြေအနေနဲ့ အလားအလာက တော်တော်လေးမှေးမှိန်းတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို မလိုချင်လို့ မဟုတ်ဘူး။ သို့သော်လဲပဲ ရွေးကောက်ပွဲကို အကြောင်းပြပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးရမယ်လို့ မထင်ကြလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဟာ တက်နေတဲ့ အစိုးရအပေါ် မူမတည်ဘဲနဲ့ လက်နက်ကိုင်ထားတဲ့ တပ်မတော်နဲ့ လက်နက်ကိုင်ထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်မှာ မူတည်နေတယ်။ သို့သော်လဲပဲ ဒီအတိုင်းတော့ မနေဘူး။ တပ်မတော်ဘက်ကလဲ တတ်နိုင်သလောက်လုပ်မယ်။ တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေဘက်ကလည်း တတ်နိုင်သလောက် ညှိနှိုင်းရေးဦးတည်လိမ့်မယ်။ NLD အစိုးရကလည်း နည်းသစ်လမ်းသစ်နဲ့တော့ သွားကောင်းသွားနိုင်တယ်။
မေး ။ ။ နောက်ဆုံးမေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ အတိုက်အခံပါ။ အောင်မြင်တဲ့ တိုးတက်တဲ့ ခိုင်မာတဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာ အတိုက်အခံက အင်မတန် အရေးကြီးပါတယ်။ Responsible opposition တာဝန်ရှိတဲ့ အတိုက်အခံတရပ် လိုပါတယ်။ ဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခုအချိန်အထိ တခါမှ တာဝန်ရှိတဲ့ အတိုက်အခံ ရှိခဲ့တယ်လို့ မထင်ပါဘူး။ ဆရာ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။ ရှေ့ အလားအလာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  အတိုက်အခံဟာ တကယ်တာဝန်ရှိတဲ့ အတိုက်အခံတရပ် ဖြစ်နေပြီလို ထင်ပါသလား။ အဲဒီလို ဖြစ်လာအောင် ဘယ်လို လုပ်သင့်သလဲ။ ဘယ်လောက်ကြာအုံးမလဲ ဆိုတာတွေကို နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သုံးသပ်ပေးပါ။
ဖြေ ။ ။ အမှန်ပါပဲ။ ကျနော်တိုိ့ လွတ်လပ်ရေးရပြီးကတည်းက ဖဆပလ လက်ထက်ကတည်းက အတိုက်အခံပါတီကောင်း မရှိသလောက်ပေါ့။ အဲဒါလဲပဲ (၁၄) နှစ်ပဲကြာတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ လုံးဝမရှိ။ အခုလဲပဲ ၂၀၁၅ မှာ မရှိဘူး။ (၂၅) ရာခိုင်နှုန်း ယူထားတဲ့ တပ်မတော်ကလဲ ဗိုလ်ချပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ခိုင်းတာပဲ လာပြောတယ်။ ကြံ့ခိုင်ရေးကလဲ သူ့အကျိုးစီးပွားပဲ သူပြောတယ်။ ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  နိုင်ငံရေးအဆင့်ဟာ လွှတ်တော်မှာ အတိုက်အခံပါတီကောင်း ဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေ မရှိပါဘူး။ အမှန်ကတော့ ရှိကိုရှိသင့်တယ်လို့ ကျနော်မြင်တယ်။ ကျနော့်ပါတီဖြစ်တဲ့ NLD အစိုးရဖြစ်လဲ အတိုက်အခံပါတီကောင်းကနေ ဖေးမထိန်းကျောင်းလို့ရှိရင် NLD ဟာ ဒီထက်ထိ မဖြစ်သင့်တာ မဖြစ်အောင် သူ့အနေနဲ့ တည့်မတ်လာနိုင်တယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ ရေရှည်အတိုက်အခံပါတီကောင်းတရပ် ရှိအောင် နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှု၊ နိုင်ငံရေးရင့်ကြတ်မှု ဆောင်ရွက်သင့်ရတယ်။ အဲဒီအတွက်တော့ အားလုံးကလုပ်မှရမယ်။ အားလုံးကလုပ်မှဆိုတော့ ဖွဲ့စည်းပုံကြီးမရှိမှ၊ ပြင်ပြီးမှလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အားလုံးကဝိုင်းပြီး ကြိုးစားသင့်ကြတယ်လို့ ကျနော် အကြံပြုပါရစေ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲ ကငျြးပခြိနျ အလှမျးမဝေးတော့ပမေယျ့ ပွညျသူလူထုရဲ့ လှုပျရှားတကျကွှမှုတှေ သိပျမတှမေ့မွငျရသေးပါဘူး။ ပွညျသူတှေ လာမယျ့ရှေးကောကျပှဲကို စိတျဝငျစားကွပါရဲ့လား။ ဒီရှေးကောကျပှဲက ဘယျလို အပွောငျးအလဲမြိုးတှေ ပျေါ ထှကျလာဖို့ မြှျောလငျ့နိုငျပါသလဲ။ ကိုယျတိုငျ ၁၉၉၀ ပွညျ့ရှေးကောကျပှဲမှာ NLD ကိုယျစားပွု ရှေးကောကျခံတဦး ဖွဈခဲ့တဲ့ မွနျမာ့အရေးသုံးသပျသူ ဒေါကျတာတငျ့ဆှနေဲ့ ဦးကြျောဇံသာတို့ ဆှေးနှေးသုံးသပျထားပါတယျ။
မေး ။ ။ ဒီတပတျမှာ ကနြျောဆှေးနစေခေငျြတာက မွနျမာနိုငျငံမှာ မကွာခငျကငျြးပတော့မယျ့ ရှေးကောကျပှဲနဲ့ ပတျသကျပါတယျ။ ရှေးကောကျပှဲဆိုတာ ဒီမိုကရစေီရဲ့ အရေးကွီးတဲ့ ဖွဈရပျတခု ဖွဈသလို၊ ပွညျသူတှကေ သူတို့ဘာတှေ လိုခငျြတယျ၊ နိုငျငံရေးဆန်ဒ ဘာတှရှေိသလဲဆိုတာကို ဖျောထုတျတဲ့ပှဲလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ တျောတျောလေး တကျတကျကွှကွှ ရှိကွပါတယျ။ ပွညျသူတှေ နိုငျငံရေးအသိတရား နိုးကွားတကျကွှနရေမယျ့အခြိနျ ဖွဈပါတယျ။ တကယျတော့ မွနျမာနိုငျငံမှာ နောကျလာမယျ့ (၅) လမှာ ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပဖွဈမယျဆိုရငျပေါ့။ ဒါပမေဲ့ မွနျမာနိုငျငံမှာ အခုအခါမှာ နိုငျငံရေးအရ တကျကွှလှုပျရှားစှာ လုပျကိုငျနတောကို ဘာမှမတှရေ့ဘူးဆိုတော့ ကနြျော စဉျးစားမိပါတယျ။ ပထမတခုက ကိုဗဈ-၁၉ ကွောငျ့လား။ သို့တညျးမဟုတျ ဒီရှေးကောကျပှဲဟာ အရငျနှဈ ရှေးကောကျပှဲနဲ့ မတူတော့ဘဲနဲ့ သိပျစိတျဝငျစားစရာ၊ စိတျလှုပျရှားစရာ ရှေးကောကျပှဲ ဖွဈနလေို့လားဆိုတာကို ဆရာ ဘယျလိုသုံးသပျပွောလိုပါလဲ။ ကနဦး အကဉျြးခြုပျသုံးသပျပွပါ။
ဖွေ ။ ။ ပထမတခကျြကတော့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျ ကူးစကျရောဂါလို့ ထငျတာပေါ့။ သို့သျောလဲပဲ ဒီထကျလေးနကျတဲ့ နိုငျငံရေးအကွောငျးတှေ သုံးသပျလို့ရတယျ။ ပထမတခကျြကတော့ ဦးကြျောဇံသာ ပွောသလိုပဲ အခါတိုငျး ရှေးကောကျပှဲတှမှောလဲ လကျရှိ အာဏာရပါတီ NLD က နိုငျနိုငျတယျ။ နိုငျမှာသခြောတယျဆိုတဲ့ သခြောမှုတခကျြ။ ဒုတိယတခကျြကတော့ NLD နိုငျလဲပဲ ပွီးခဲ့တဲ့ (၅) နှဈကို ကွညျ့ပွီးတော့ တိုငျးပွညျထူးပွီးတော့ ကောငျးလာစရာ အလားအလာ အမြားကွီးမြှျောလငျ့လို့ မရသေးဘူးဆိုတဲ့ အခကျြကတခု။ နောကျတခကျြကတော့ NLD ပါတီရဲ့ ပွီးခဲ့တဲ့ (၅) လကို ကွညျ့လိုကျလို့ရှိရငျ အားရတာတှလေဲရှိတယျ။ အားမရတာတှလေဲ ရှိတယျ။ အဲဒါ နောကျ (၅) နှဈလညျး ဒီလိုဖွဈလိမျ့မယျ။ နောကျတခါ NLD မဟုတျတဲ့ တခွားပါတီတှေ ကွံ့ခိုငျရေးပါတီအပါအဝငျ ပါတီအသဈတှကေောဟာ ကနြေျာ့အမွငျမှာတော့ ပွညျသူလူထုလညျး ဒီလိုမွငျကောငျးမွငျနိုငျပါမယျ - NLD ကို ကြျောနိုငျမယျ့ အလားအလာ မရှိနိုငျဘူးတခကျြရယျ၊ နောကျအရေးကွီးဆုံးတခကျြကတော့ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒေ ပွငျဆငျရေးကို ပွညျသူပွညျသားတှကေ NLD ဘယျလောကျကွိုးစားကွိုးစား မရခဲ့တာရှိတော့ အခုအားလြှော့တဲ့သဘော မဟုတျဘဲနဲ့ NLD (၇၅) ရာခိုငျနှုနျး နိုငျတဲ့ပါတီတခုခုကတော့ ရှိတော့လိုအပျတယျဆိုတဲ့ အနနေဲ့ကတော့ NLD ကိုပဲ မဲပေးနိုငျကွလိမျ့မယျလို့ ထငျတဲ့အတှကျ ပွညျသူလူထုဟာ တခွားသောမြှျောလငျ့ခကျြ မရှိတဲ့အတှကျ လကျရှိအတိုငျးပဲ အေးအေးဆေးဆေးသှားမယျ့ဆိုတဲ့ ယူဆခကျြ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ နောကျဆုံးတခကျြကတော့ ကနြျောတို့လူမြိုးတှကေ သိတဲ့အတိုငျးပဲ ဖုတျပူမီးတိုကျ၊ ကောကျရိုးမီးဆနျဆနျ နီးလာတော့မှ ဝုနျးဝုနျးဒိုငျးဒိုငျး တကျတကျကွှကွှ လုပျကွလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ထားပါတယျ။
မေး ။ ။ ဖှဲ့စညျးပုံပွငျဆငျဖို့အတှကျ (၇၅) ရာခိုငျနှုနျးလိုတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ NLD ကိုပဲ အားပေးမယျလို့ ဆရာကတှကျတယျ။ သို့သျော လူတခြို့က စဉျးစားကွတယျ။ NLD က ပွညျပမှာတော့ နိုငျနိုငျတယျ။ ဒါပမေဲ့ တိုငျးရငျးသားဒသေတှမှော NLD ဟာ ဒီရှေးကောကျပှဲမှာ ထောကျခံမှုနညျးသှားမယျလို့ တှကျနကွေပါတယျ။
ဖွေ ။ ။ အဲဒါလဲ မှနျပါတယျ။ သို့သျောလဲပဲ ကနြျောတို့သမိုငျးကွောငျး ၁၉၉၀၊ ၂၀၁၂၊ ၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲတှကေိုကွညျ့ရငျ NLD ဟာ တိုငျးရငျးသားဒသေတှမှော နိုငျတာနညျးတယျ။ တိုငျးရငျးသားပါတီ၊ တိုငျးရငျးသားလူမြိုးစုခံပါတီတှကေပဲ နိုငျကွတာမြားတယျ။ အဲဒီတော့ လာမယျ့ရှေးကောကျပှဲလညျး အဲဒါထကျထူးမယျလို့ ကနြျော မထငျဘူး။ NLD ကလညျး ပိုပွီးတော့ မြှျောလငျ့ထားပုံတော့ မရဘူး။ ဒါကွောငျ့ နောကျရှေးကောကျပှဲလညျး တိုငျးရငျးသားဒသေတှမှော အခုထကျ နညျးနညျးလြော့ကောငျးတော့လြော့မယျ ကနြျောထငျတာကတော့ တိုငျးရငျးသားကိုယျစားပွုပါတီတှကေ နိုငျနိုငျတယျ။ သို့သျောလဲပဲ လှတျတျောအရအေတှကျတခုလုံးနဲ့ ယှဉျရငျတော့ NLD ဟာ အရအေတှကျအရတော့ သိပျပွီးတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ထကျတော့ ထူးမယျလို့ ကနြျောမထငျဘူး။
မေး ။ ။ နောကျတခုက NLD ဟာ ဖှဲ့စညျးပုံပွငျဆငျရေးအတှကျ အခကျအခဲရှိတာ အမှနျပါပဲ။ ဆိုတော့ အခုရှေးကောကျပှဲနဲ့ တကျလာပွီးလို့ NLD ထပျနိုငျပွီဆိုရငျကော ဖှဲ့စညျးပုံပွငျဆငျနိုငျမယျ့ အလားအလာ ဘယျလောကျမြား ရှကေို့တိုးပွီး ရှိလာနိုငျပါသလဲ။ ဖှဲ့စညျးပုံ ပွငျနိုငျမယျ့အလားအလာ ဘယျလောကျပိုပွီးကောငျးလာနိုငျမယျ ထငျပါသလား။
ဖွေ ။ ။ ကံသကေံမတော့ မှနျးလို့မရဘူး။ သို့သျောလဲပဲ NLD ဟာ ဖှဲ့စညျးပုံ ပွငျဆငျရေးကို ကတိပေးထားတဲ့အတိုငျး ကွိုးစားခဲ့ပါတယျ။ အတတျနိုငျဆုံး ကွိုးစားခဲ့တယျ။ ပွညျသူလူထုကလညျး ပူးပေါငျးပါဝငျတယျ။ တခွားသော မဟာမိတျပါတီတှကေလညျး ပူးပေါငျးဆောငျရှကျကွလို့ အဆငျ့တျောတျောတခုတော့ ရောကျလာခဲ့တယျ။ လှတျတျောထဲမှာ ကျောမတီဖှဲ့ပွီး ပုဒျမတှကေို `၏ သညျ ပွငျတာလောကျတော့ ရလာတာပေါ့။ အဲဒီတော့ (၅) နှဈအတှငျးမှာ အဲဒီလောကျရရငျ နောကျ (၅) နှဈမှာတော့ ဒီအတိုငျးတော့ NLD က သှားမှာမဟုတျဘူး။ တခွားသောနညျးဗြူဟာ ပွောငျးပွီးတော့၊ တိုးပွီးတော့ နညျးဗြူဟာနဲ့ ဖှဲ့စညျးပုံပွငျဆငျရေး လုပျလာနိုငျတယျ။ အဲဒီလိုလုပျလာနိုငျခွငျးဟာ အဓိကတော့ ကနြျောမွငျတယျ အတားအဆီးဟာ တပျမတျော စဈတပျပါပဲ။ အဲဒီတော့ တပျမတျောကို ဘယျလိုစညျးရုံးမလဲ။ ဘယျလိုဆောငျရှကျမလဲကတော့ NLD ခေါငျးဆောငျတှရေဲ့ ခေါငျးထဲမှာတော့ ရှိနမေယျလို့တော့ ကနြျောထငျတယျ။ အဲဒီတော့ နညျးသဈလမျးသဈတှနေဲ့ NLD ဟာ တပျမတျောဘကျက လြှော့လာအောငျ၊ သို့မဟုတျ ဖှဲ့စညျးပုံပွငျဆငျရေး အတိုငျးအတာတခုအထိ ရောကျအောငျ NLD က နညျးသဈတှေ ရှာနိုငျတယျလို့တော့ မြှျောလငျ့ရပါတယျ။
မေး ။ ။ တပျမတျောကို စညျးရုံးပွီးတော့ ဖှဲ့စညျးပုံပွငျဖို့ ကွိုးစားသလိုပဲ။ တခြိနျတညျးမှာ တိုငျးရငျးသားတှရေဲ့ အခှငျ့အရေးနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ ပွငျစရာတှေ အမြားကွီးရှိနပေါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ တိုငျးရငျးသားဒသေတှမှော ရှေးကောကျပှဲနိုငျတဲ့ တိုငျးရငျးသားပါတီတှကေို ဝနျကွီးခြုပျခနျ့ခှငျ့ မပေးတာ၊ ဒါကို ၄၇ ဖှဲ့စညျးပုံကတညျးက ဒီပွဿနာက ရှိလာတဲ့ကိစ်စပါ။ ဆိုတော့ အဲဒီကိစ်စတှမှောကော တိုငျးရငျးသားတှနေဲ့ အပေးအယူလုပျပွီးတော့ အဲဒီဘကျမှာ ပိုပွီးတော့ တိုငျးရငျးသားတှကေို ပိုပွီးအခှငျ့အရေးပေးလာခွငျးအားဖွငျ့ တိုငျးရငျးသားတှေ ထောကျခံမှုရအောငျ NLD အနနေဲ့ လုပျလာစရာ မမွငျဘူးလား။
ဖွေ ။ ။ အဲဒါလဲပဲ တခုရှိတယျ။ လကျရှိ ၂၀၀၈ ဖှဲ့စညျးပုံအရ စခနျးသှားနကွေရတာ ဖွဈတာကွောငျ့ NLD ပဲတကျတကျ၊ တခွားပါတီပဲတကျတကျ လကျရှိအတိုငျး သမ်မတခနျ့တဲ့လူက ဝနျကွီးခြုပျပဲ ရှေးရတယျဆိုတဲ့ ဖှဲ့စညျးပုံအတိုငျး သှားရတာ။ အဲဒီအတှကျ တိုငျးရငျးသားဒသေတှမှော ကနြျောမွငျတာ တခြို့ဒသေတှမှော အဲဒီဒသေခံတိုငျးရငျးသားပါတီတှနေဲ့ ထိပျတိုကျဖွဈခဲ့ဖူးပါတယျ။ ဖွဈခဲ့ပါတယျ အတိအလငျး။ အဲဒီတော့ နောငျမဖွဈအောငျဆိုတာလဲ ကနြျောအမွငျကတော့ အာမခံလို့တော့ မရဘူး။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ အစိုးရတရပျဟာ ဖှဲ့ကတညျးက ဖှဲ့စညျးပုံအတိုငျး သှားရမှာဆိုတော့ အခု ၂၀၁၅ ကို ကွညျ့လိုကျရငျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ဦးဆောငျနတေဲ့ နိုငျငံရေးလမျးကွောငျးဟာ တျောလှနျရေးဆနျတဲ့ လမျးကွောငျးမဟုတျဘဲနဲ့ ညငျညငျသာသာ သှားတဲ့နညျးကို သှားနတေော့ ကနြေျာ့အမွငျကတော့ နောငျ (၅) နှဈလဲပဲ NLD နိုငျလို့ရှိရငျ ဖှဲ့စညျးပုံကိုကြျောပွီးတော့ တနညျးအားဖွငျ့ ဖှဲ့စညျးပုံကို ထားလို့ရတဲ့အပိုငျးတှေ ထားပွီးတော့ တျောလှနျရေးဆနျတဲ့ ပွုပွငျပွောငျးလဲမှုတှေ လုပျကောငျးမှလုပျမယျလို့ ကနြျောမြှျောလငျ့တယျ။ ဒါကွောငျ့ တိုငျးရငျးသားတှဘေကျကလဲ တခွားနညျးတှနေဲ့ ကွိုးစားကောငျးကွိုးစာရငျတော့ ရလိမျ့မယျလို့ ကနြျောထငျတယျ။
မေး ။ ။ နောကျ ပွညျတှငျးစဈရပျစဲရေး၊ ငွိမျးခမျြးရေးရရှိမယျ့ အလားအလာကော NLD က နိုငျခဲ့ရငျ ဘယျလောကျရှတေို့း ဆောငျရှကျနိုငျမယျလို့ ထငျပါသလဲ။ ဒီရှေးကောကျပှဲမှာကော ပွညျသူတှအေနနေဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးကို ဘယျသူဆောငျကဉျြနိုငျမလဲဆိုတဲ့ ကိစ်စမြိုးနဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးဟာ ရှေးကောကျပှဲအတှကျ အရေးပါတဲ့ ကိစ်စတခုလို့ ထညျ့သှငျးစဉျးစားစရာအကွောငျးတခုကော ဖွဈမနဘေူးလား။
ဖွေ ။ ။ ကနြေျာ့အမွငျကတော့ ပွညျတှငျးစဈရပျစဲရေးနဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးဟာ တိုငျးပွညျအတှကျ အရေးကွီးဆုံး ကိစ်စရပျကွီးတခု ဖွဈသငျ့တယျလို့ ကနြျောယူဆတယျ။ ရှေးကောကျပှဲ အကွောငျးအခကျြ issue ကွီးတခု ဖွဈသငျ့တယျလို့ ကနြျောယူဆတယျ။ သို့သျောလဲပဲ အခွအေနနေဲ့ အလားအလာက တျောတျောလေးမှေးမှိနျးတယျ။ ငွိမျးခမျြးရေးကို မလိုခငျြလို့ မဟုတျဘူး။ သို့သျောလဲပဲ ရှေးကောကျပှဲကို အကွောငျးပွပွီးတော့ ငွိမျးခမျြးရေးရမယျလို့ မထငျကွလို့ ဖွဈပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးဟာ တကျနတေဲ့ အစိုးရအပျေါ မူမတညျဘဲနဲ့ လကျနကျကိုငျထားတဲ့ တပျမတျောနဲ့ လကျနကျကိုငျထားတဲ့ တိုငျးရငျးသားအဖှဲ့အစညျးတှပေျေါမှာ မူတညျနတေယျ။ သို့သျောလဲပဲ ဒီအတိုငျးတော့ မနဘေူး။ တပျမတျောဘကျကလဲ တတျနိုငျသလောကျလုပျမယျ။ တိုငျးရငျးသားအငျအားစုတှဘေကျကလညျး တတျနိုငျသလောကျ ညှိနှိုငျးရေးဦးတညျလိမျ့မယျ။ NLD အစိုးရကလညျး နညျးသဈလမျးသဈနဲ့တော့ သှားကောငျးသှားနိုငျတယျ။
မေး ။ ။ နောကျဆုံးမေးခငျြတဲ့အကွောငျးအရာကတော့ အတိုကျအခံပါ။ အောငျမွငျတဲ့ တိုးတကျတဲ့ ခိုငျမာတဲ့ ဒီမိုကရစေီနိုငျငံတှမှော အတိုကျအခံက အငျမတနျ အရေးကွီးပါတယျ။ Responsible opposition တာဝနျရှိတဲ့ အတိုကျအခံတရပျ လိုပါတယျ။ ဆိုတော့ မွနျမာနိုငျငံမှာ အခုအခြိနျအထိ တခါမှ တာဝနျရှိတဲ့ အတိုကျအခံ ရှိခဲ့တယျလို့ မထငျပါဘူး။ ဆရာ ဘယျလိုမွငျပါသလဲ။ ရှအေ့လားအလာ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အတိုကျအခံဟာ တကယျတာဝနျရှိတဲ့ အတိုကျအခံတရပျ ဖွဈနပွေီလို ထငျပါသလား။ အဲဒီလို ဖွဈလာအောငျ ဘယျလို လုပျသငျ့သလဲ။ ဘယျလောကျကွာအုံးမလဲ ဆိုတာတှကေို နောကျဆုံးအနနေဲ့ သုံးသပျပေးပါ။
ဖွေ ။ ။ အမှနျပါပဲ။ ကနြျောတို့ လှတျလပျရေးရပွီးကတညျးက ဖဆပလ လကျထကျကတညျးက အတိုကျအခံပါတီကောငျး မရှိသလောကျပေါ့။ အဲဒါလဲပဲ (၁၄) နှဈပဲကွာတယျ။ အဲဒီနောကျမှာတော့ လုံးဝမရှိ။ အခုလဲပဲ ၂၀၁၅ မှာ မရှိဘူး။ (၂၅) ရာခိုငျနှုနျး ယူထားတဲ့ တပျမတျောကလဲ ဗိုလျခပျြမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျ ခိုငျးတာပဲ လာပွောတယျ။ ကွံ့ခိုငျရေးကလဲ သူ့အကြိုးစီးပှားပဲ သူပွောတယျ။ ဒီနေ့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ နိုငျငံရေးအဆငျ့ဟာ လှတျတျောမှာ အတိုကျအခံပါတီကောငျး ဖွဈနိုငျတဲ့ အခွအေနေ မရှိပါဘူး။ အမှနျကတော့ ရှိကိုရှိသငျ့တယျလို့ ကနြျောမွငျတယျ။ ကနြေျာ့ပါတီဖွဈတဲ့ NLD အစိုးရဖွဈလဲ အတိုကျအခံပါတီကောငျးကနေ ဖေးမထိနျးကြောငျးလို့ရှိရငျ NLD ဟာ ဒီထကျထိ မဖွဈသငျ့တာ မဖွဈအောငျ သူ့အနနေဲ့ တညျ့မတျလာနိုငျတယျ။ အဲဒီတော့ ကနြျောတို့နိုငျငံမှာ ရရှေညျအတိုကျအခံပါတီကောငျးတရပျ ရှိအောငျ နိုငျငံရေးယဉျကြေးမှု၊ နိုငျငံရေးရငျ့ကွတျမှု ဆောငျရှကျသငျ့ရတယျ။ အဲဒီအတှကျတော့ အားလုံးကလုပျမှရမယျ။ အားလုံးကလုပျမှဆိုတော့ ဖှဲ့စညျးပုံကွီးမရှိမှ၊ ပွငျပွီးမှလဲ ဖွဈနိုငျတယျ။ အားလုံးကဝိုငျးပွီး ကွိုးစားသငျ့ကွတယျလို့ ကနြျော အကွံပွုပါရစေ။